Mhuno, physiognomy: tsananguro chimiro uye unhu
Nokuzvidzora kurimwa, Kwepfungwa
The Chiso chomunhu - somunhu bhuku yakazaruka. Uye uyo anoziva kuverenga vanogona kudzidza zvakawanda pamusoro interlocutor, pfungwa dzake uye nevavariro.
Physiognomy - kuverenga zviso nesayenzi
verenga sainzi patinosangana inonzi physiognomy. Sezvakataurwa nenyanzvi, nayo dzakatangira China mazana emakore akawanda akapfuura. Vamwe vanodavira kuti chiso zvinhu anogona kufanotaura njodzi muridzi wavo.
Pasinei chokwadi kuti nezera, chiso omunhu ari kuchinja, chikuru zvinhu - nechapamusoro, maziso, mhuno, miromo - kuramba chete, uye dzimwe nguva unyatsova kuratidza.
Physiognomy zvinowanzodavirwa kushandiswa nevanhu ruzivo munzvimbo dzakawanda. Pasinei norudzi, rudzi, zera uye pabonde, manzwiro nguva dzose ngapaonekwe zvakafanana.
Saka, mentalists, kana ngaiteerere chaizvo vanhu vanogona "verenga" munhu pamberi kusaina bhizimisi zvibvumirano kana kuti kufungidzira kuti ichaguma zvinokosha Nhaurirano.
Huru features, izvo kushanda physiognomists
Nyanzvi mune physiognomy dzakakurumbira chaizvo mumabhizimisi uye zvebhizimisi. In zvachose mune shanu chikuru chiso zvinhu:
The chikuru parameters mhino
Ngationei vanogara mhuno, uye tikanyatsoongorora mamiriro ayo. The mhino iri nechepakati chiso uye ndiyo convex chikamu.
Zvinotevera parameters anganzi kusarudza zvokuita.
Long mhino unoratidza munhu obduracy.
Very refu mhino zvahungava hwakaita zvakavimbika panguva mukana kubudirira zvikuru mumunda njere kana capriciousness ari munhu, sezvo anodudzira physiognomy.
Wide mhino ndiko kuora mwoyo, mumwe murume anopa norunyararo, Sophistication uye kuvimbika.
Yokuisira pfupi mhino - vanhu akazaruka, akanaka uye ushamwari.
Slim uye zvishoma chisina kutsetseka mhino kunogona kuva chiratidzo simba yevasungwa. Kana izvi zviri kuwedzerwa chiduku ano, mumwe munhu kazhinji anodada uye musoro, iye asina mutorwa mumwe utsinye uye kutsunga.
Narrow mhino - zvakaoma-vanoshanda vanhu, asi chero kubatsira haisviki nyore kwaari uye dzinoda kuti zvakaoma.
Kwete mupfungwa uye akangwara, sezvo mutemo, muri yokuisira mhino ane sandara musana uye yakafara mapapiro.
Kana mukadzi ane zvishoma mhino, zviri zvikuru godo, uye kana zviri kumusoro ane simba musana - vanogona kukwikwidzana nyore nemunhu mukuru chinzvimbo munzanga, vanoti sayenzi physiognomy.
Kana chikamu ichi mhino ane woita chimiro, munhu ane zvinogona kuva yakabudirira uye akabudirira unhu.
Apo muromo mhino droops - Munhu ane hypersexuality.
Sharp mhino physiognomy anotsanangurwa anonyengera uye kuvimbika hunhu.
Muromo mhuno, yakaita muromo segondo, ndiko kutsiva.
Full uye hombe muromo - chakanaka hunhu, ushamwari, kuti propensity kuita avo vairwisa zvinhu nokuda kwevamwe.
Too saggy muromo nechekare kuti ichimuremera rokumusoro muromo, kwete kutaura zvakanaka, asi kunongedzera tsika hurumende.
Nehanya mhino physiognomy inobata sezvo rusununguko kubva pabonde zvisizvo uye nekusagona kuvanza.
Rancor, kusavimbana uye kunyumwira - shamwari husingaperi murume ane mahwanda mhino yokutenda.
On yose physiognomy kufunga vakawanda 24 inoti chokuita zvakananga mhuno, riri pamusoro 576 zvakasiyana siyana.
Upamhi wemhino, uyewo chimiro uye kureba mhino, angamuudza zvakawanda pamusoro unhu hwemunhu. In kwavo kufara iri pakutsvaga nevakwegura, unhu wacho. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vane rakafara mhino anogona fema yakawanda mhepo, inova huru tsime roupenyu.
Munhu ane rakafara mhino, akakurumidza akafuridzirwa pfungwa uye vakagadzirira kutora matanho ari chete wechipiri, asi nokukurumidza inotonhodza pasi uye nomukondombera kure. Long-rokuti zvinangwa - kwete ake simba pfungwa.
Murume ane yakatetepa mumhino achava akasiyana zvachose yapfuura mumwe. Iye qualitatively anoita mabasa kuti zvinoda nguva uye ane mwero hunhu, sezvo physiognomy.
Aquiline mhino rinopa muridzi wayo ari chinji vasingasaruri. Impermanence kunoratidzwa munyaya zvose zvoupenyu. Akanga yakawanda pfungwa dzakasiyana, ndokusaka vanhu kumhanyira kubva basa kune mumwe, uye haagoni kusarudza. Uyezve, zvakadai mutete-ganda vanhu. Dzimwe mubishi kukurukurirana, vanogona varikwizire ano yake, izvo zvinoreva kuti vamwe mashoko akabata munhu pakurarama.
Mativi serin'i mumhino anoratidza nokungwarira uye makaro.
Square mhino zvaizobatsira kushingaira, simba uye akatsunga munhu uyo vavariro ichi akagadzirira kuenda kuburikidza.
The kunhivi Maumbirwe wemhino, sezvinoita mutemo, ndezvaiye rokusika vanhu, vavambi. Rationality - huru pakuderedza yezvakaita vanhu ava.
Oval mhino - chiratidzo uchinzvera nenyota ushingi.
Large uye akakwana mhino
Interesting uye vazhinji madziro Sayenzi physiognomy.
Big mhino hunoratidza kuti chinokosha chiremera wayo, uyewo nevakwegura, unhu hwakanaka. Ava ndivo vanhu vanozvikudza vanoziva unokosha ake, vasimba dzakawanda dzebhizimisi kwayo.
Chii chinofanira kuva yepamhino akakwana? Nyanzvi vanokurondedzera sezvo kumeso, ane woita yokutenda uye mapapiro vakazvitsaurira zvakanaka. Munhu akadaro akasiyana ushingi, nokusachena uye kuzvitsaurira.
Asi anonzi bulbous mhino physiognomy anoti akazaruka, ushamwari uye anofara vanhu. Vari dzinoratidzwa anokurumidza kutsamwa, uye vanoda kukurudzirwa uye kurudziro.
Split mhino - kazhinji kacho chiratidzo mudzvinyiriri. munhu akadaro anosanganisa nokufungira, kusavimbana uye kunyara uye kunyara. Panguva iyoyowo ane kunoshamisa nenjere uye anokwanisa kugadzirisa dambudziko pamusoro izvo vakarova vanhu vazhinji. Muenzaniso wakadzama murume mahwanda mhino aiva Iosif Stalin.
Ruvara mhino, maererano physiognomists, unoitawo basa kuziva unhu hwemunhu.
Somuenzaniso, kupenyerera mhino chiratidzo nokubudirira mune ramangwana uye kubudirira mune zvemari. chikamu ichi zvinoreva Pink, goridhe uye Peach-mavara mhino.
Asi yakatsvuka anovimbisa kurasikirwa. Ndewevhu mhino kana wachena mumvuri inoratidza Isimba rakadini rinogona kubudiswa chirwere, girini - murume haana kurerekera kudzorera mari chikwereti. Kunyange subtleties yakadaro inogona tsunga nokutarisa womunhu mhino.
Physiognomy anoti mhino kunozivisa upenyu hwevanhu ava nemakore 40 kusvika 50 makore. Panguva ino, munhu anotova imwe nzvimbo munyika, uye chinogona kuoneka nezvaanogona ayo maererano kuvaka basa.
On the mhino, unogona kufanoona unhu hwemunhu, asi zvizhinji inobvawo pane munhu. Kunyange yakanaka kuti rinovimbisa kubudirira mhino asingadi kubatsira zvidhakwa uye muropa nezvinodhaka kubudirira. The zvikuru yokuita chikamu chiso, iro unogona kutonga hunhu, - mumhuno. Physiognomy zvinopa pfungwa yokuona kuchiva kwevanhu, asi hazvisi chose inobudirira nokuti maitiro evanhu kunoenderana zvinhu zvakawanda.
Sei vakadzi vakashanyira pfungwa: "Ndinovenga mwana wenyu?"
Basic ehupfumi nzeve
Chii mutemo aiwanzopiwa wokushanda zviitiko?
Chii extraversion? Extrovert: mamirire. Extraversion: Scale
Kusanyatsozviremekedza, ayo zvinokonzera nemigumisiro
Wevhu - chii? Kugadzira zviumbwa
Dhiyabhorosi "Mwanasikana weAmerica": vatevedzeri, mabasa, mafates evanhu vanyori
Nzira yekubika catfish muvheni nokukurumidza uye inonaka
Kukudziridza eggplant mizambiringa yakabva kumwe
Fire chengetedzo vana
Pavanotsiva kudziyisa unotonhorera "Priora": pamwe uye pasina mhepo kutonhodza
Chii Hotels muThailand kupfuura kuyemurwa Vashanyi
Infiniti QX50: wongororo, review, bvunzo nemotokari, Tuning
Tevera mitemo iyi kuva muenzi yakanakisisa!
Mwana wangu zuva nezuva makore 1 gore
Vana avtotrenazher-vhiri - chaizvo kutyaira Simulator
Ndezvipi zviroto kubva paMugovera kuenda paSvondo